Raped by tourists: Children in Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam | Thailand
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Thailand » Ukudlwengulwa yizivakashi: Izingane eziseBrunei Darussalam, eCambodia, e-Indonesia, eLao PDR, eMalaysia, eMyanmar, ePhilippines, eSingapore, eThailand naseVietnam
Ukudlwengulwa yizivakashi: Izingane eziseBrunei Darussalam, eCambodia, e-Indonesia, eLao PDR, eMalaysia, eMyanmar, ePhilippines, eSingapore, eThailand naseVietnam
Izivakashi zidlwengula izingane eBrunei Darussalam, eCambodia, e-Indonesia, eLao PDR, eMalaysia, eMyanmar, ePhilippines, eSingapore, eThailand naseVietnam; iqiniso elidabukisayo lomkhakha wezokuvakasha nezokuvakasha womhlaba wonke. Ukuthula akuyona inketho.
Imithetho ephelelwe yisikhathi kanye nokuqiniswa komthetho okubuthakathaka kwandisa ingozi yokuxhashazwa ngokocansi kwezingane kulo lonke elaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia kusho umbiko omusha.
Izici zendabuko zokuxhashazwa kwezingane ngokocansi, njengokushada kwezingane nokushushumbiswa kwabantu ziyaqhubeka nokuba yinkinga, kusho i-NGO ECPAT International “Ukuxhashazwa Ngokocansi Kwezingane e-Southeast Asia, ”Ehlola lezi zenzakalo emazweni angu-11 akulesi sifunda. Kodwa-ke, lo mbiko uthi lokhu kukhuliswe eminyakeni yamuva ngezinga eliphansi lokuqwashisa ngale nkinga, kanye nokwanda kwezokuvakasha kwezifunda nokwanda kwe-Intanethi.
“Ukwanda okusheshayo kwezokuvakasha kubhebhethekisa ukuxhashazwa ngokocansi kwezingane esifundeni,” kusho ucwaningo. "Okunye okube kubhebhethekisa lesi simo kube yintuthuko enkulu kwezobuchwepheshe be-Intanethi nezokuxhumana, ezikhuphule amathuba ahlukahlukene okuxhaphaza izingane ngokocansi, noma ukuzuza ekuxhashazweni ngokocansi kwezingane."
I-ECPAT ithi okuyimbangela yalezi zinto eziyingozi yingqalasizinda yezomthetho ebuthakathaka emazweni amaningi aseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, evumela abephula umthetho ukuthi benze ngokungazijezisi. Futhi akusibona abokufika kuphela okufanele basolwe, abenzi bokubi namuhla ikakhulu bavela esifundeni. “Yize izivakashi ezivela emazweni aseNtshonalanga kuseseyinkinga enkulu, kuyinkolelo eyiphutha eyaziwayo yokuthi yizona eziningi ezihlukumeza izingane ngokocansi,” kusho uRangsima Deesawade, uMxhumanisi weSifunda we-ECPAT weSouth-Asia Asia. "Amacala amaningi eningizimu-mpumalanga ye-Asia enziwa ngabantu bamazwe akuleso sifunda noma ezinye izingxenye zase-Asia."
Ngokwalolu cwaningo olusha, ngenkathi izindawo zokuvakasha zendabuko ezifana neThailand kanye nePhilippines zisaqhubeka nokuba usongo ezinganeni, ngenxa yezindawo ezishibhile zokuhamba nezindawo zokuhlala, amanye amazwe anjengeCambodia, i-Indonesia, iMyanmar neViet Nam sekuyizindawo ezithandwayo ezinganeni abenzi bobulili.
Lo mbiko ubuye uqhakambise ubungozi obandayo obudalwa ukwanda kokufinyelela kwi-Intanethi, ethi kuyingozi ezinganeni futhi kuzibeka engcupheni enkulu yokuhlukunyezwa nokuxhashazwa. Ithi ukukhiqizwa kwezinto zokuhlukumeza izingane ngokocansi eziku-inthanethi ePhilippines manje kungenisa imali efinyelela ezigidigidini ezi-US zamadola wonyaka; amanye amazwe esifundeni akhonjwe njengabaphathi abakhulu bezithombe zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi; naseLao PDR, ezinye izitolo zama-CD zidayisa ngokusobala izinto zokuhlukumeza izingane ngokocansi.
"Ukusongelwa kokuhlukunyezwa ngokocansi kuyi-intanethi kuyinto ebhekene nezingane emhlabeni wonke," kusho uDeesawade. Futhi njengoba i-Southeast Asia iya ngokuya ixhuma, iya ngokuya ixhunyaniswa nale nkinga yomhlaba wonke. ”
Amanye amaqiniso / umkhondo ovezwe ngumbiko ufaka:
Kusenezikhala ezinkulu ekuqondeni ukuxhashazwa ngokocansi kwezingane esifundeni. Kudingeka ucwaningo oluningi;
Amaphethini wokona ahlukile phakathi kwabahambi abavela emazweni ahlukene. Isibonelo, amadoda ase-Asia maningi amathuba okuba ahlukumeze amantombazane amancane, kufaka phakathi amantombazane amancane kakhulu asezintombi, kuyilapho izephulamthetho zaseNtshonalanga zinamathuba amaningi kunabantu base-Asia abaya kubafana abancane ngenhloso yokuxhashazwa ngokocansi.
Abenzi bobulili bezingane baya ngokuya befuna izingane ngokusebenzisa izikhundla zokuzithandela noma zobungcweti, njengokuthola amathuba emisebenzi noma amathuba okuzithandela ezikoleni, emakhaya ezintandane nasezinhlanganweni ezizimele;
ECebu City ePhilippines, enye yezindawo ezihlupheka kakhulu ezweni, amaphesenti angama-25 abo bonke abathengisa ngomzimba emigwaqweni yizingane ezixhashazwa ngokocansi;
Ocwaningweni lwabafana abasebenza emgwaqweni eSihanoukville, eCambodia, amaphesenti angama-26 abaphendulile aveze ukuthi ayeke enza ucansi nabantu abadala ngenhloso yokuthola imali, ukudla noma okunye ukuzuza nezinzuzo;
Imishado yesikhashana iyanda e-Indonesia. Njengoba amantombazane ase-Indonesia ephoqelelwa ukuba ashade, lawa abizwa ngokuthi 'imishado ye-mutah', ahlinzeka ngamathuba amadoda aphesheya, ikakhulukazi avela eMiddle East, okuxhaphaza izingane ngokocansi. Ukushushumbiswa kwezingane kuyanda ukuze kuhlinzekwe lesi sidingo; futhi
Amantombazane nabafana abaneminyaka eyi-12 nangaphansi bayiswa eThailand bayokwenza umsebenzi wokuthengisa ngocansi. Kukholakala ukuthi abanye abazali bathengise izingane zabo ngqo embonini yezocansi, kanti kokunye izingane ziqale ziqashwe ukuthi zisebenze emkhakheni wezolimo, njengabasebenzi basezindlini noma kwezinye izimboni kepha bese zishushumbiswa embonini yezocansi eThailand.
Ukuxhashazwa Ngokocansi Kwezingane e-Southeast Asia ukubuyekezwa kwedeski lezincwadi ezivela emazweni ayi-12 Southeast Asia (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand naseViet Nam). Iqokomisa okuningana okuphathelene nentuthuko ekwandeni kokuxhashazwa ngokocansi okwenzeka esifundeni sonke.
Ukuze uthole umbiko ogcwele: http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/02/Regional-Overview_Southeast-Asia.pdf
I-ECPAT International iyinethiwekhi yomhlaba wonke yezinhlangano ezinikele ekupheliseni ukuxhashazwa kwezingane ngokocansi. Ngamalungu ayi-103 emazweni angama-93, i-ECPAT igxile ekushushumbisweni kwezingane ngezinjongo zocansi; ukuxhashazwa kwezingane ngobufebe nezithombe zocansi; ukuxhashazwa kwezingane ngokocansi online; nokuxhashazwa ngokocansi kwezingane emkhakheni wezokuvakasha nezokuvakasha. I-ECPAT International Secretariat izinze eBangkok Thailand.
Asia Bangkok Brunei Cebu Cebu City Internet Myanmar Philippines Southeast Asia Thailand
I-Air Astana yethula isevisi yansuku zonke yase-Astana-London
Izindiza ezisimeme: inhloso yabagibeli bendiza eyibhiliyoni engu-1 ebekwe yi-IATA
I-New Orleans ine-Prevalence ephezulu ye-Genital Herpes ...
I-Alaska Airlines yethula indiza entsha enetimu ye-Star Wars
I-CDC: I-Mask Order isasebenza manje
Isikhumulo sezindiza saseSan José sihlonipha impilo nefa likaNorman...
I-WTTC ikhuluma nongqongqoshe be-EU mayelana nokubuyiselwa kwezokuvakasha...
I-Amniotic Membranes Market 2022 Abadlali Ababalulekile, i-SWOT...
Ukuhlolwa Okusha Okusheshayo kwe-ALS Toxin BMAA
UHeathrow uzoqeda igunya lemaski yobuso ngoMashi 16
I-DC-Area Freedom House Museum Ivulwa Kabusha enabathathu...
I-Russia itshela izinkampani zayo zezindiza ukuthi zifunde ukundiza ngokungaboni
I-Empath Effect Yabantu Abazwela Kakhulu Ezinhlungwini...
I-Finnair: Izindiza zaseYurophu naseMelika, umzila omusha waseMumbai...
I-flyadeal: I-Azerbaijan Entsha, i-Egypt, i-Georgia ne-Jordan...
Ukuqomisana Ku-inthanethi Nokuhlangana Nezihambi Ngaphezu Kwezikabili...
Ukuya e-Europe Kuyavulwa Kabusha
Indlela Izinombolo Zokuhamba Ezingezinhle Ezibikezela Ngayo Ukuvakashelwa Okuhle...
I-Oosterdam ye-Holland America Line Ibuyela...
Isibuyekezo Esisha Ngokwelashwa Okuphumelelayo Ngokumelene Nolaka...